Izindaba - Isizathu esenza i-mesh yokuhlobisa yensimbi idume.
Insimbi iyisici sokuklama esinomqondo oqinile wokuklama. Ifomula yombala inika abantu umuzwa wokucwebezela, okwenza isitayela sonke sangaphakathi nangaphandle sibe nesibindi, inoveli ne-avant-garde.
Kwenza umphumela uwonke ubonakale usakazwa futhi kunzima ukuwulawula, kodwa empeleni muhle futhi unobuhle, onikeza abantu ukuthungwa okuhle nomuzwa ophezulu.
Umbala wensimbi ngokuvamile muhle kakhulu, unomqondo oqinile wokuklama. Ukukhetha ingilazi nezinto zensimbi kungangeza umuzwa wokuklama nesitayela endaweni yasekhaya.
Imigqa yokuhlobisa yensimbi eshumekiwe odongeni nangaphezulu inokwakheka okuqinile, imigqa ecacile kanye nezendlalelo ezihlanzekile, eziletha umthelela ohlukile wokubuka kubantu.
I-mesh yensimbi yokuhlobisa isetshenziswa kabanzi kuma-facade, ama-partitions, uphahla olumisiwe, ama-sunshades, ama-balconi namaphasishi, ama-blind blinds, izitebhisi, njll.
1. I-Facade: iphrojekthi yokuhlobisa yangaphandle iwukusebenza okuhle kakhulu kwezici nemisebenzi ye-meshwork yokuhlobisa insimbi. Ukusetshenziswa kwemeshi yensimbi yokuhlobisa ekwakheni umhlobiso wangaphandle kuye kwavusa impendulo engapheli futhi kwadonsa ukunaka kwabantu.
2. Uphahla: kunezindlela zokulenga indiza kanye ne-arc, ikakhulukazi ukumodela: i-mesh yensimbi yokuhlobisa ibonakala obala, ivulekile, isindisa isikhala, ukufakwa okulula nokulula. Inemisebenzi eminingi yohlelo lokusebenza nemisebenzi yokuhlobisa kunezinye izinto, futhi ihambisana kakhulu nezidingo zokuvikelwa kwemvelo nokuphepha komlilo. Lokhu kuhlangabezana nezidingo zophahla.
3. Udonga, isikhawu: Imeshi yensimbi yokuhlobisa njengodonga, isikhawu. Amazinga ahlukene okuvula kanye nezakhiwo ezahlukene ze-mesh zokuhlobisa zizoletha imiphumela ehlukene endaweni yokwakha. Ngokwemibono ehlukene, ukudluliswa kokukhanya kanye nemisebenzi yokuvikela yamameshi ensimbi nayo ihlukile. Kungakhathaliseki ukuthi i-classical noma yesimanje, ingenza kahle. Ayithathi isikhala futhi ngeke ikwenze uzizwe umgoqo nokucindezeleka kwesikhala.
4. I-Guardrail, ukuvikelwa kwebhuloho: lolu hlobo lwe-mesh luyisicaba, luhlanganisiwe, luyanwebeka, alukwazi ukumelana nomthelela, alugugi, izici zalo azikufihli ukungcola, futhi kulula ukuzigeza. Ikhwalithi ephezulu yezinto zokusetshenziswa ziqinisekisa ukuqina kwayo futhi igqamile njengokusha, okungagcini nje ngokuhlangabezana nezidingo zokuphepha, kodwa futhi inezici ezibonakalayo.